အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အမေရိကန်၊ ဟောင်ကောင် (တရုတ်)၊ အိန္ဒိယ၊ အီးယူ၊ ရုရှား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးများကျင်းပ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး သည် ယနေ့ နံနက် ၇:၀၀ နာရီမှ စတင်၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် တို့ အစည်းအဝေး၊ (၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် (တရုတ်) စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၈) ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ-အိန္ဒိယ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အီးယူ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာတို့ အစည်းအဝေးနှင့် (၁၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး တို့ ကို နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ပါဝင် တက်ရောက် သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၊ အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး ကိုယ်စားလှယ်(ဝန်ကြီး)၊ ဟောင်ကောင်(တရုတ်)၊ အိန္ဒိယ၊ ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ စီးပွားရေး ဝန်ကြီးများ၊ အီးယူ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်နာ၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး ဝန်ကြီးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato Dr. Amin Liew Abdullah နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများက ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက ပူးတွဲသဘာပတိများ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေး ကော်မရှင်နာ တို့ အစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကုန်သွယ် ရေး ကိုယ်စားလှယ် H.E. Katherine Tai နှင့် အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့အကြား ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သက်ရောက်မှုများအပေါ် တုံ့ပြန်နိုင်မည့် အစီအစဉ်များ၊ အာဆီယံ-အမေရိကန် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဘောင်နှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအောက်ရှိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မှု အပေါ် တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များအတွက် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံ-အမေရိကန် စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံ-အမေရိကန် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု မူဘောင် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းလုပ်ငန်းအခြေအနေများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်မှုကို ဦးတည် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မှုကြောင့် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ အတွက် ဒီဂျစ်တယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီများပံ့ပိုးပေးသွားရန် အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ (၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ−ဟောင်ကောင် (တရုတ်) စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ရာ ဟောင်ကောင် (တရုတ်)၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီး H.E Mr. Edward Yau Tang-wah နှင့် အာဆီယံစီးပွားရေး ဝန်ကြီးများက ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအလွန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ်နှင့် အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်ကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး အသက်ဝင်မှု အပေါ် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်ဝန်ကြီးများက အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ် တွင် အသစ်ထပ်မံတိုးချဲ့ထည့်သွင်းသည့် နယ်ပယ် (၅) ခုဖြစ်သည့် လူ၊ အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များ ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်စေရေး (SPS)၊ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် အရည်အသွေးကိုက်ညီမှု စစ်ဆေးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (STRACAP)၊ မူပိုင်ခွင့် (IP)၊ ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင် ရေးတို့အပေါ် အတည်ပြုခဲ့ပြီး အာဆီယံ- ဟောင်ကောင် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ် (၂၀၂၀-၂၀၂၁) အောက်မှ စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ်နှင့် အာဆီယံ-ဟောင်ကောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် တို့ အပေါ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ စာချုပ်အသက်ဝင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးမြောက်ခဲ့မှုနှင့် စာချုပ် (၂) ခု အား အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးက အသက်ဝင်ခဲ့ခြင်းအပေါ်ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟောင်ကောင် (တရုတ်) က ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် စိတ်ဝင် စားမှုအပေါ် ဝန်ကြီးများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေများ၊ ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေကို မျှဝေခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အလွန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ကုလသမဂ္ဂ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ၊ အာဆီယံ ဘက်စုံ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဘောင်နှင့် ဂျီအမ်အက်စ် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ပြန်လည် ဦးမော့စေရေး စီမံချက်ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးနှင့် အခြား ဆေးပစ္စည်းများ အကူအညီပေးသည့်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရန်နှင့် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယအကြား နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေးအတွက် အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အလွန် စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကုန်သွယ်ရေးအရာရှိများနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍပါဝင်သည့် ပူးတွဲလုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခု တည်ထောင်ရန် အဆိုပြုခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အဆိုပြုချက်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးက အသိအမှတ်ပြု ကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ (၁၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-အီးယူ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကို ကျင်းပခဲ့ရာ အီးယူ ကုန်သွယ်ရေး ကော်မရှင်နာ H.E. Valdis Dombrovskis နှင့် အာဆီယံ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကိုလည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အာဆီယံနှင့် အီးယူတို့အကြား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ ထူထောင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည့် မူဘောင်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုအခြေအနေများအပေါ်တွင်လည်းကောင်း အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အာဆီယံ-အီးယူ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကို ဝန်ကြီးများက အတည်ပြုခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆွေးနွေးရာတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ များစွာအရေးပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အထူးသဖြင့် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ လွယ်ကူစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ (၁၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ရုရှား စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ကို ကျင်းပခဲ့ရာ ရုရှားနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Vladimir llyichev နှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးဝန်ကြီးများက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် အာဆီယံ-ရုရှား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် အာဆီယံနှင့် ယူရေရှားစီးပွားရေးကော်မရှင်တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ၂၀၂၀-၂၀၂၅ ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေ အနေတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် အာဆီယံ-ရုရှား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လမ်းပြမြေပုံနှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့ကို ဝန်ကြီးများက အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးစနစ်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆီသို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အာဆီယံ-ရုရှား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လမ်းပြ မြေပုံနှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၅ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အောက်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များသည် ကောင်းမွန်သည့် အထောက် အပံ့ကောင်းများဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိများလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။